I-Glucometer One Touch Ultra Easy: izibuyekezo, inani, imiyalo Van Touch Ultra Easy > Amamitha kashukela egazi
Johnson imitha yeglucose yegazi - uJohnson touch eyodwa elula
I-One Touch Ultra Sugar Meter iyithuluzi elincane futhi elihlanganisiwe lokukala ushukela wegazi kubantu abanesifo sikashukela. Idivaysi inomklamo wesitayela wesimanje, okhumbuza ukubukeka kwe-flash drive ejwayelekile noma isidlali se-MP3, futhi ayibukeki njengedivaysi yezokwelapha. Ngakho-ke, le mitha ithanda kakhulu abantu abasha abazama ukungakhulumi ngeqiniso lokuthi banesifo sikashukela.
I-Life Scan One Thinta i-Ultra Glucometer - uJohnson & Johnson, e-USA inombukiso we-crystal osezingeni eliphakeme, onomfanekiso ogqamile futhi osobala, ngisho neziguli esezikhulile futhi ezinombono ophansi zingazibona kahle izimpawu ezisesikrinini. Imiphumela yokuhlolwa kwegazi ikhonjiswa esikrinini nesikhathi nosuku lokufunda.
Idivayisi ine-interface ecacile futhi kulula ukuyisebenzisa. Imitha isebenza ngemichilo yokuhlola i-Van Touch Ultra, futhi isebenzisa ikhodi eyodwa futhi ayidingi ukuguqulwa. Idivayisi ibhekwa ngokushesha okukhulu, ngoba inikeza imiphumela yokuhlolwa imizuzwana emihlanu ngemuva kokufakwa kwegazi. Kubandakanya i-glucometer iyakwazi ukugcina ukukhumbula izilinganiso zokugcina ezingama-500, okubonisa isikhathi nosuku lokuhlaziywa.
Ukwakheka okulula, usayizi omncane nesisindo esikhanyayo kukuvumela ukuthi uphathe idivaysi eyodwa ye-One Touch Ultra esikhwameni sakho futhi wenze ukuhlolwa nganoma isiphi isikhathi osidingayo, ekhaya nakwezinye izindawo.
Ukuze ugcine futhi uthwale, ungasebenzisa icala elithambile elilula, elihlanganisiwe kusethi yemitha ye-OneTouch Ultra Easy. Ungasebenzisa insiza ngaphandle kokuyisusa ecaleni.
Ezitolo ezikhethekile ungathenga le modeli yedivayisi ngentengo engabizi, amakhasimende anikezwa Ukukhetha okubanzi kwemibala yamacala. Ukuhlanza imitha akudingekile.
Izinzuzo ze-onetouch Ultra
Abasebenzisi abaningi bakhetha le modeli yemitha ngenxa yezimpawu ezinhle zepynynial.
Idivaysi inomklamo wesitayela wanamuhla. abasebenzisi abaningi abathandayo.
Idivayisi inosayizi omncane we-108x32x17 futhi inesisindo sama-gramu angama-32, okuvumela ukuthi uwuthwale nawe futhi usebenzise noma isiphi isikhathi sosuku, noma ngabe isiguli sikuphi.
IVan Touch Ultra Izi ithwala i-plasma calibration, ekhombisa ukunemba kwayo okuphezulu.
Idivaysi inombukiso ocacile ocacile nezinhlamvu ezinkulu ezikhanyayo.
Idivayisi inemenyu enembile yokulawula imitha ye-OneTouch Ultra Easy. Ukuphathwa kwenziwa izinkinobho ezimbili.
Imiphumela yokuhlolwa kwegazi ingatholakala ngemizuzwana emihlanu ngemuva kokusebenzisa imitha.
IVan Touch Ultra Easy inembe kakhulu. Imiphumela yocwaningo icishe ifane naleyo eyenziwe elabhoratri.
Ikhithi ye-Van Touch Ultra Ultra glucose kit ifaka ikhebula le-USB ekhethekile, ongadlulisa kulo imiphumela yokuhlolwa kwikhompyutha yakho, emva kwalokho imininingwane ingaphrintwa ngokushesha kwiphrinta futhi ikhonjiswe kudokotela ngenkathi ithola amandla amakhulu ezinguquko ushukela wegazi.
IGlucometer Van Thinta kanye nemininingwane
Lapho wenza ukuhlolwa kwegazi kwe-glucose kuyo, kusetshenziswa indlela yokulinganisa ye-electrochemical. Idivayisi ilinganiswa yiplasma yegazi, ngoba lolu cwaningo ludinga kuphela i-1 ofl yegazi, elincane kakhulu uma liqhathaniswa namadivayisi afanayo walo mkhiqizi. Kunoma ikuphi, isifo sikashukela kufanele sihlolwe njalo sikashukela.
Njengomitha wamandla webhethri i-One Touch Ultra Easy isebenzisa ibhetri elilodwa le-lithium CR 2032 kuma-3.0 volts, anele ngezilinganiso eziyi-1000. Ukubhoboza ipeni elikhethekile kufakiwe kwikhithi yedivayisi futhi kukuvumela ukuthi uhlwithe isikhumba ngaphandle kobuhlungu futhi ngokushesha.
uzophawula amanye amaphuzu wezobuchwepheshe:
Iyunithi yokulinganisa yi-mmol / litre.
Idivayisi ingavula ngokuzenzakalela lapho ifaka umucu wokuhlola bese icisha imizuzu emibili ngemuva kokuqedwa kokuhlolwa.
Imitha ye-glucose yokulinganisa ushukela I-One Touch Ultra Easy ingasetshenziswa emazingeni okushisa angama-6 kuye kwangama-44 degrees, umswakama ohlobene kusuka kumaphesenti ayi-10 kuye kwangama-90.
Ukuphakama okuvumelekile kufinyelela kumamitha angama-3048.
Kungenzeka wenze izilinganiso ngemitha yeVan Touch Ultra Easy ebangeni ukusuka ku-1.1 kuya ku-33.3 mmol / ilitha.
Idivayisi yinguqulo elula, ngakho-ke ayinawo umsebenzi wokuhlanganisa izibalo isonto, amasonto amabili, inyanga noma izinyanga ezintathu.
Amalebula wokudla nawo awanikezwa kule yunithi.
Idivayisi inayo iwaranti engenamkhawulo evela kumenzi, eqinisekisa ikhwalithi yayo ephezulu.
Imiyalo yokusebenzisa onetouch Ultra
Ukuze wenze ukuhlolwa kwegazi ushukela, udinga umucu wokuhlola i-Van Touch Ultra noma i-Van Touch Ultra Easy, efakwe kusokhethi olukhethekile kudivayisi ize ime. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi oxhumana nabo be strip babheke phezulu. Imichilo yokuhlola ivikelekile ngesendlalelo esikhethekile, ukuze ubathinte noma kukuphi.
Ngemuva kokuthi umucu wokuhlola usufakiwe, ikhodi izokhonjiswa kwisibonisi sedivayisi. Kufanele kuqinisekiswe ukuthi ukufakwa kwengozi kunekhodi efanayo. Ngemuva kwalokho ungaqala amasampula egazi. Ukubhoboza iMono ukukwenza ngomunwe, entendeni yesandla noma engaphambili. Cishe isimo esifanayo sizodinga i-touch ultra eyodwa, imiyalo yokusebenzisa yayo izofana. ngakho-ke izimiso eziyisisekelo zokusebenzisa amadivayisi ziyafana.
Ngaphambi kwenqubo, kubalulekile ukuthi uqaphele ukugeza izandla zakho, uzigeze ngensipho bese usula ngokuphelele ngethawula. Ukubhoboza esikhunjeni kwenziwa ngokusebenzisa ipeni lokubhoboza kanye ne-lancet entsha. Ngemuva kwalokhu, udinga ukufaka kancane isizalo sendawo yokubhoboza bese uthola inani elifanele legazi lokuhlaziywa.
Umucu wokuhlola ulethwa ekudonselweni kwegazi futhi ubambe kuze kube yilapho i-rose igcwele ngokuphelele indawo oyifunayo. Ubumfihlo balesi strip sokuvivinya ukuthi ngokuzimela bamba inani elifanele legazi.
Uma lingekho igazi elanele, kufanele usebenzise umucu omusha wokuhlola bese uqala ukucubungula futhi.
Ngemuva kokuthi i-glucometer ihlole ukwehla kwegazi, imiphumela yokuhlola izovela kwisibonisi esikhombisa isikhathi, usuku lokuhlaziywa, kanye noyunithi lokulinganisa. Uma kunesidingo, idivaysi izokhombisa ngezimpawu kwisibonisi uma kunezinkinga ngemitha noma umugqa wokuhlola. Kubandakanya nedivaysi kuzonikeza isiginali uma isiguli sembulile amazinga aphezulu kashukela egazini.
Idivaysi enhle, uma unethuba.
IGlucometer iyi imitha kashukela wegazi ekhaya. Into edingekayo kulabo abaphethwe yisifo esikhohlisayo - isifo sikashukela.
Wonke umuntu onesifo sikashukela uyazi - ukuze alawule ushukela wakhe kalula, Dinga idivaysi enembile futhi kulula ukuyisebenzisa.
Ukuthinta okukodwa okuphelele kulula.
Le yimitha yami yokuqala yeglucose. Futhi wangifaneleka kukho konke, kepha kwadingeka ngishintshele kolunye. Ukuzeconomieskunjalo. Ngilinganisa ushukela wegazi cishe nsuku zonke, futhi kuphuma okungenamsebenzi.
Izindleko imivimbo yokuhlola mayelana nama-ruble ayi-1000 wezingcezu ezingama-50.
Izindleko ze isisetshenziswa esifundeni sama-ruble angama-2500.
Icala liza ngemibala ehlukene, ungakhetha okuluhlaza okotshani noma okupinki, ngokwesibonelo. Idivayisi yami ngimpunga.
Kulabo abangavamile ukukala, kanye nalabo abangakwazi ukukhokhela okunethezeka okunjalo, ngincoma ukuthenga le mitha.
Njengoba amamitha wokuthinta elilodwa angenye kakhulu ngqo emhlabeni.
Ngendlela, ngubani ongazi, i-100% yama-glucometer anembile okusebenzisa ekhaya awekho. Okujwayelekile kubhekwa njengephutha lama-20%.
Ungakhohlwa! I-Ultra lula kulinganiswa nge-plasma, futhi lokhu kusho ukuthi umphumela kufanele uhlukaniswe ngu-1.11.
Isibonelo, uma imitha ikhombisa u-7.2, ushukela wakho osegazini lonke ngu-6.4.
Noma ungahumusha umphumela etafuleni elinamathiselwe kumitha.
Noma imitha oyikhethayo, ngokucophelela funda imiyalo!
Kala kahle futhi ube nempilo!
Inani lokudla okunempilo kanye nenkomba ye-glycemic kafulawa nemikhiqizo kafulawa
Izimpawu zokuhlasela kwesifo sikashukela nge-hyperglycemia kanye ne-hypoglycemia
I-Glaucoma yesifo sikashukela iyinkinga edala ubumpumputhe
Ukwelashwa kwesifo sikashukela se-Succinic acid
Ngabe i-hookah noshukela wegazi kuhlobene kanjani? Sawubona ntambama Ngingabhema i-hooka enesifo sikashukela? Ngiyesaba ukuthi lokhu kungangezela ushukela wegazi. Sawubona, Andrey! ...
Ukudla kwesifo sikashukela - uhlu lwemikhiqizo evunyelwe nenqatshelwe
Ungakanani cholesterol esebisini nakukhilimu omuncu?
Ushukela omnyama weshukela
OkunyeIzindlelaUkwelashwa okuhlukileUkwelashwa nokuvimbelaImpilo enesifo sikashukelaUkudla ngesifo sikashukelaI-Dummy DiabetesicsUkuxilongaIsifo sikashukela kubantu besifazaneAmanyikwe
Isifo sikashukela uMayonesi 2
Izinzuzo kanye nokulimala kwamakhukhamba kwabashukela
Ithebula No. 5: Ukudla kwe-pancreatitis
I-Sophora Japanese: imiyalo esetshenziselwa uhlobo 2 sikashukela
I-Edema kwisifo sikashukela: kungani kwenzeka
Izithelo Zesifo Soshukela Esigada Ushukela